Amalungelo awodwa omenzi we-Apple inkqubo ye-3D ngaphandle kweglasi yezixhobo eziphathwayo | IPhone iindaba
Amalungelo awodwa omenzi we-Apple inkqubo ye-3D ngaphandle kweglasi yezixhobo eziphathwayo
Ukuba akukho zimanga zibi, iApple iza kwazisa i-iPhone 7 Plus / Pro ngekhamera yeelensi ezimbini (amarhe anayo, 12 x 12 Megapixels) ngoSeptemba. Xa sithetha ngale khamera mbini, ndiyamangaliswa kukuba akukho nto ikhankanyiweyo kwimithombo yeendaba okanye ucinga ukuba iApple ingasebenzisa ilensi yesibini ukwenza isiphumo se3D. Kodwa ukuba akukho mntu uthetha ngayo ayiyisusi njengemeko enokwenzeka, kwaye ipatent entsha evela kuTim Cook kunye nenkampani isenza sicinge ukuba balungiselela izixhobo eziphathwayo ezisivumela ukuba sibone Umxholo we-3D ngaphandle kweiglasi.
La patent (nge AppleInsider), ebizwa ngokuba yi "Fine-Brusque Autostereoscopic Screen", yenziwa esidlangalaleni ngolwe-Lwesibini odlulileyo, nangona ibinikezelwe nge-21 kaJanuwari 2015. Inkqubo echaziweyo iya kusebenzisa i-matrix yee-pixels ene-matrix yesibini ye-subpixels kunye nezakhiwo ze-lens, eyokugqibela ibe leyo ikhupha ukukhanya kwiindidi ezahlukeneyo. Elona candelo libalulekileyo lale nkqubo yile nto bayibize ngokuba yi "beam steerer" ethi inyamekele jolisa ukukhanya okuchanekileyo kumbonisi.
I-iPhone yekamva ingasivumela ukuba sibone i-3D ngaphandle kweiglasi
Ukwazi ukuba kukuphi ukukhanya kwaye kweliphi icala ukukhupha ukukhanya, a Isixhobo se-iOS siza kusebenzisa ikhamera yangaphambili kunye / okanye isantya. IiMacs ezikhoyo namhlanje azinayo i-accelerometer, kodwa iApple ayikhuphi ngaphandle kokusebenzisa le nkqubo kwiMacBook.
Ngokuchazwa kwelungelo elilodwa lomenzi ngokuchazwe ngentla, kuya kufuneka sithethe kancinci malunga ne-3D ngaphandle kweiglasi kwizixhobo eziphathwayo. Nangona sele silubona olu hlobo lomxholo "ngaphandle koncedo" kwiithelevishini ezininzi, awukakhululwa. Akukho sixhobo sisebenzayo sinika amandla okujonga i-3D ngaphandle kweglasi. I-Apple ayizukuba yinkampani yokuqala yokumilisela i-iPhone enekhamera ezimbini, kude nayo; I-LG sele isungule i-Optimus 2011D ngo-3, kodwa bebengazi ukuba bangayithengisa njani. Kwakulo nyaka, uHuawei uza kuzisa ikhamera ezimbini zeekhamera kwiiveki ezimbalwa ngaphambi kokumiliselwa kwe-iPhone 7.
Sele ndichazile apha ngasentla, kudala ndiziva ukuba Ngu-Apple ekufuneka ethathe eli nyathelo. Apha unokucinga ukuba ndithetha oku kuba ndingumntu othanda iApple kwaye ndibhala kwiActualidad iPhone, kodwa ndicinga ukuba xa ezo zeCupertino zibonisa indlela eya phambili ngokweekhamera ezimbini kunye nezikrini ze3D ngaphandle kweiglasi, ezinye ziya kubalandela kwaye wonke umntu, ngokupheleleyo bonke abasebenzisi baya kuphumelela.
Njengoko sihlala sisitsho, ukuba ilungelo lomenzi lifakiwe / lifunyenwe akuthethi ukuba siyakuyibona kwisixhobo esizayo, kodwa oku okanye okunye okunxulumene nale patent kungekudala okanye kamva. Kananjalo, xa sijonga ukuba iikhamera ezimbini zinokuthatha imifanekiso ye-3D, ndicinga ukuba siza kuyibona kwakamsinya kunokuba kamva. Ngaba ngekhe kube yinkqonkqoza etafileni ukumbona sele ekhona iPhone 7?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Amalungelo awodwa omenzi we-Apple inkqubo ye-3D ngaphandle kweglasi yezixhobo eziphathwayo
I-CCNotes isivumela ukuba sithathe ngokukhawuleza amanqaku kwiZiko loLawulo (iJailbreak)
I-Breadcrumb10 isivumela ukuba sisebenzise isitayile esitsha se "Buyela ku" se-iOS 10 kwi-iOS 9